Farmaajo oo kala-diraya Guddigii doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo kala-diraya Guddigii doorashooyinka
Madaxweyne Farmaajo ayaa kala diraya guddigii doorashooyinka ee lagu muransanaa, qorshahan ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo madaxweynaha maalmaha soo socda, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya - Macluumaad ay Keydmedia Online ka haleyso Villa Somalia ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayo inuu kala diro guddigii lagu muransanaa ee doorashooyinka kaasoo ay diidanaayeen Midowga musharaxiinta iyo qaar kamida madaxda dowlad goboleedyada dalka.
La taliyayaasha madaxweynaha JFS Mudane Farmaajo ayaa kula taliyay inuu ku dhawaaqo arrintan, inkastoo weli uusan qaadan go'aanka, haddana waxay ubadantahay in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo inuu kala diray guddigii ku xareysnaa Hotel Decale maalmaha soo socda.
Beesha caalamka ayaa waxay ku cadaadinaysay madaxweyne Farmaajo inuu isku keeno dhinacyada isku mari la' doorashada, maadaama uu yahay madaxweynihii Soomaaliya ayna tahay inuu tix galiyo saamileyda siyaasadda dalka.
RW Rooble ayaa kal hore ku dhawaaqay in doorasho loo dareeray, waxa uuna sheegay in dowlad goboleedyada maqan ay diideen in ay soo fariistaan miiska cabashada, taa baddalkeedana ay xukuumaddu go'aansatay in la qabto doorasho. Hadalkaasi waxaa ka hor yimid Beesha Caalamka iyagoo ku taliyay in la isku tanaasulo, wada-hadalna loo yimaado magaalada Muqdisho.
Cadaadis qaatay muddo kaddib Farmaajo ayaa wada qorshe uu ku doonayo inuu ku kala diro guddiga markiisii horeba laga soo kala xulay xafiisyada Villa Somalia, kan Ra'iisul Wasaaraha iyo kan Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA.
Guddiga Doorashooyinka Dadban, ayaa dejiyey doorashada Baarlamaanka 6-da January ee 2021, laakiin durba waa uu ka dhacay waqtigii loogu tala galay, waxaana fashilmay jadwallo labo jeer uu soo saarey.
Shaki ayaa ka jira qabashada doorashada Soomaaliya bishan ama February, iyadoo ay taagan yahay khilaafka hirgelinta qaabkii doorashada ee ay ku heshiiyeen hoggaamiyeyaasha siyaasadeed bishii September ee sanadkii hore.